के तपाई सिस्नो खानुहुन्छ ? यस्ता छन् फाइदाहरु जानीराख्नुस
निशान न्युज पुष १२, 2075
पोषण तत्वसिस्नोमा फलाम (आइरन), पोटासियम, क्याल्सियम, भिटामिन ए, सी र डी जस्ता पौष्टिक तत्व प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । यद्यपि, चेतनाको अभावका कारण गाउँघरमा अधिकांशले सिस्नो खाँदैनन् । औषधीय गुण-सिस्नोमा पाइने फलामले महिलामा रक्तअल्पता र कमजोरी हुनबाट जोगाउँछ ।-कपाल झर्ने समस्या र डन्डिफोर, दादलगाय...
यौन सन्तुष्टि पाउन कत्रो लिङ्ग ... ?
पुष ८, 2075 काठमाडौं । समयको परिवर्तन सँगै मानिसको सोचमा परिवर्तन भइरहेको छ । विशेषगरी यौनको मामलामा मानिसहरू अलि बडी खुल्न थालेका छन् । अहिले मानिसहरू धेरै भन्दा धेरै यौन सन्तुष्टि कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने कुराको चासो राख्ने गर्छन् । ...
जाडोमा तुलसी सेवनका फाइदा यस्ता छन्
पुष ५, 2075 काठमाडौं । धार्मीक मान्यता अनुसार तुलसीको आफ्नै छुट्टै मान्यता छ । धेरैको घर आँगनमा तुलसी रोपिएकै हुन्छ । तुलसी धार्मीक् तथा आर्युवेद आन्यता अनुसार मानव स्वास्थ्यका लागि अति लाभदायक मानिन्छ । तुलसी जाडो याममा निकै उपयोगी ...
माइग्रेन ठीक पार्ने बहुउपयोगी रिट्ठाक...
पुष ४, 2075 एजेन्सी । रिट्ठा एक किसिमको फल हो जसलाई सुकाएर साबुन, डिटर्जेन्ट र श्याम्पू बनाउन प्रयोग गरिन्छ । रिट्ठा र त्यसको पाउडर पनि सजिलै पाइन्छ । यसको प्रयोग कपाललाई बलियो र कालो बनाउनका लागि गरिन्छ अनि यसले स्वास्थ्य सम्बन्धी ध...
जुम्रीमा स्वास्थ्य सुदृढीकरणसम्बन्धि ...
पुष १, 2075 प्युठान । स्वास्थ्य सेवा सुदृढिकरण, प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण तथा योजना तर्जुमा सम्बन्धमा अवसर र चुनौति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम प्यूठानको जुम्रीमा सम्पन्न भएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय प्युठानको आयोजना र कालिका विकास ...
भित्रिन थाल्यो भक्तपुर क्यान्सर अस्पत...
पुष १, 2075 भक्तपुर । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा अत्याधुनिक ल्याब मेसिन र बिशेषज्ञ डाक्टर र प्राबिधिक भित्रिन थालेका छन् । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा हालै प्याथोलोजीको एडभान्सड् मेशिन (भिटोज ३५) जडान गरिएको छ । यस अत्याधुनिक मेशिनबाट...
सन्तनगरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम...
पुष १, 2075 महेन्द्रनगर । भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. ९ खल्ला सन्तनगरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ । भीमदत्त नगरपालिका, सुदूरपश्चिम फार्मेसी संगठन र सुर्योदय बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले सन्तनगरमा संयुक्त शिविर आयोजना गर्द...
यी आसन प्रयोग गरी सेक्स गर्नुस्, खुसी...
पुष १, 2075 काठमाडौं । सेक्सप्रति महिलालाई पनि उत्तिक्कै रुचि, जति पुरुषलाई हुन्छ । तर सेक्सका क्रममा महिलालाई मन पर्ने आसनबारे पुरुषले ध्यान दिंदैनन् । संसर्ग दुवैको सहमतिमा तर सन्तुष्टि पुरुषको भागमा मात्र हुँदा सुखमय यौन जिवनमा फाट...
एक्लै यौन सन्तुष्टि कसरी पाउने ? पढौं
पुष १, 2075 काठमाडौं । दुई व्यक्तिबीच शारीरिक सम्पर्क गरेर यौन सन्तुष्टि लिने प्रक्रिया सबैभन्दा सहज प्रक्रिया हो तर सधैँ यो सम्भव हुन्न । विवाह पछिको अवस्थामा समेत श्रीमान्–श्रीमती सधैँ सँगै नहुन सक्छन् । हाम्रो समाजमा विवाहअगाडि शा...
जाडो याममा बदाम खानुका फाईदा के- के छ...
पुष १, 2075 बदाम खनिजको स्रोत हो । यसमा प्रोटिन प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । अङ्ग्रेजीमा ’पिनट’ भनिने वस्तु नेपालमा ’बदाम’ भनेर चिनिन्छ । नेपालमा सबैतिर उपभोग गरिने खाद्य पदार्थमा बदाम पर्दैन । तर हाल आएर कतिपय साना उद्योगहरूले निकै ठुल...
डन्डिफोर के कारणले आउछ ? जोगिने कसरी ?
मंसिर २८, 2075 काठमाडौं । उफ् ! डन्डिफोरले हैरान पार्‍यो, धेरै युवा–युवती ओँठ लेप्य्राउँदै पीडा पोख्छन् । टिनेजरहरू यो समस्याले धेरै हैरान भएका हुन्छन् । आखिर के हो डन्डिफोर ? के कारणले आउँछ डन्डीफोर ? जोगिने कसरी ? जानिराख्नुहोस् : छा...
के तपाई बढि रिसाउनुहुन्छ ? सचेत रहनु...
मंसिर २६, 2075 काठमाडौं । हामीले बच्चादेखि नै सुन्दै आएका छौं, रिस मानिसको सबैभन्दा ठूलो सत्रु हो र यसले आफैलाई हानी गर्छ । हालसालै गरिएको एक अध्ययनले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ । धेरै रिसाउने मानिसलाई हृदयघातको खतरा धेरै हुने अध्ययनको नि...
के तपाई कागती पानी पिउनुहुन्छ ? यस्ता...
मंसिर २५, 2075 काठमाडौं । केही सामान्य परिवर्तनले तपाईंको स्वास्थ्यमा सकारात्मक असर पुर्याउन सक्छ । जीवनशैलीमा साधारण बदलावले पनि तपाईंलाई स्वस्थ्य र दिनभरी ऊर्जावान् रहन पनि मद्दत गर्नसक्छ । आफ्नो दिनलाई एक गिलास कागती पानीले सुरु गर्न ...
एकै व्यक्तिले धेरैसँग शारीरिक सम्पर्क...
मंसिर २४, 2075 काठमाडौं । पछिल्लो समय यौनजीवनका बारेमा थुप्रै अध्ययन र अनुसन्धान भएका छन् । भर्खरै मात्र एउटा अनुसन्धान भएको छ, जो सबै मानवका लागि महत्वपूर्ण छ । विट्रिस सोधकर्ताले गरेको अध्ययनमा एकै व्यक्तिले धेरै मानिससँग यौन सम्पर्क ...
डाक्टरको लापरवाहीले मृत्यू भएको आरोप,...
मंसिर २४, 2075 सुनसरी । प्रकाशपुरबाट गाडीले दुवै खुट्टा किचेर धरान स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएपछी प्रतिष्ठानमा झडप भएको छ । ८५ बर्षीया वृद्ध लिलाबहादुर काफ्लेको मृत्यु भएको ब...
← अघिल्लो 12… 45 46 47 48 49 50 51 52 53 … 83 84 पछिल्लो →
आज साउन १२ गते सोमबार, श्री शिव भगवानको दर्शन गर्दै हेर्नुस् आजको राशीफल यस्तो छ
कांग्रेस आमन्त्रित सदस्य विष्टलाई साधारण सदस्यताबाट समेत हटाइयो
इतिहासमा पहिलोपटक सरकारी सचिवमा लेखियो विकको नाम
आज असार महिनाको अन्तिम दिन अर्थात् असार ३१ गते बुधबार, श्री गणेश भगवानको दर्शन गर्दै हेर्नुस् आजको राशीफल यस्तो छ
आज साउन १७ गते शनिबार, श्री शनिदेवको दर्शन गर्दै हेर्नुस् यस्तो छ आजको राशीफल
साउने सोमबार भगवान श्री शिवको विषेश दिन, आज साउन १९ गते सोमबार यस्तो छ तपाईको राशीफल
आज साउन १० गते शनिबार, श्री शनीदेवको दर्शन गर्दै हेर्नुस् आजको राशीफल यस्तो छ
श्री गणेश भगवानको दर्शन गर्दै हेर्नुस् आज असार ३० गतेको राशीफल